Akụkọ - usoro mmezi ngere nchara
N'ikwu okwu n'ozuzu, onye nrụpụta ahụ atụlela njirimara nke gburugburu ebe obibi n'oge usoro mmepụta nke ngere ígwè. Na nhọpụta nke ihe na mkpuchi, ha na-agba mbọ nweta nchara nchara, na-eyi nguzogide, na-eguzogide corrosion, na mgbochi, yabụ ndị ọrụ ga-azụta Chọọ ndị nrụpụta ama ama mgbe ha na-eji mgbidi ígwè. Enwela anyaukwu ịzụta ụfọdụ ụlọ ọrụ nchara dị mma. Iji gbatịkwuo ndụ ihe eji arụ ọrụ ígwè n'èzí, isi ihe ndị a kwesịkwara imezu:
1. Zere nkwụsị.
Nke a bụ ihe mbụ ị ga -achọpụta gbasara ngwaahịa igwe a rụrụ. Ekwesịrị iji nlezianya jikwa ngwaahịa ngwaahịa igwe a rụchara arụzi; ebe a na -etinye ngwa igwe a rụrụ ga -abụ ebe a na -adịghị emetụ ihe siri ike aka; ala ebe a na -etinye ihe igwe a rụchara arụ kwesịkwara idobe ya. Mgbe ị na -etinye ebe nchekwa, ekwesịrị ịhụ na ọ kwụ chịm. Ọ bụrụ na ọ na -ama jijiji na -ejighị n'aka, ọ ga -emebi usoro nchekwa igwe ka oge na -aga wee metụta ndụ ọrụ nke igwe nche igwe.
2. Iwepu uzuzu mgbe nile.
Uzuzu dị n'èzí na -efe, na -agbakọta kwa ụbọchị, na uzuzu uzuzu na -ese n'elu mmiri ga -ada na ụlọ ọrụ nka igwe. Ọ ga -emetụta ụcha na ọmarịcha nka nka, wee mebie ihe nkiri nchekwa nka nka. Ya mere, ekwesịrị ka a na -ehichapụ ihe eji arụ ọrụ n'èzí, na akwa owu dị nro ka mma.
3. Lezienụ anya na mmiri mmiri.
Ọ bụrụ na ọ bụ naanị iru mmiri ikuku dị n'èzí, ị nwere ike nwee obi ike maka nchara nchara nke ngere ígwè. Ọ bụrụ na ọ bụ igwe ojii, jiri akwa owu kpọrọ nkụ hichapụ mmiri mmiri na -arụ ọrụ ígwè; ọ bụrụ na mmiri na -ezo, hichapụ mmiri mmiri ahụ ka ọ kpọọ nkụ n'oge mmiri ozuzo kwụsịrị. Ebe mmiri ozuzo acid na -ezokarị n'ọtụtụ mpaghara obodo anyị, mmiri ozuzo nke fọdụrụ n'ihe igwe ga -ehichapụ ozugbo mmiri ozuzo gasịrị.
4. Zere acid na alkali
Acid na alkali bụ “onye na -egbu nke mbụ” nke ngere ígwè. Ọ bụrụ na acid na -emebi ngere ígwè (dịka sulfuric acid, mmanya), alkali (dị ka methyl alkali, mmiri ncha, mmiri soda), jiri mmiri dị ọcha sachapụ unyi ozugbo, wee jiri akwa owu kpọrọ nkụ hichaa ya. .
5. Kpochapụ nchara
Ọ bụrụ na ngere nchara gbachasịrị ajị, ejikwala akpụkpọ ụkwụ aja aja ya n'ụkpụrụ nke gị. Ọ bụrụ na nchara dị obere na nke na -emighị emi, ị nwere ike itinye ncha owu nke etinyere na mmanụ injin na nchara. Chere nwa oge wee were akwa hichaa ya iji wepu nchara. Ọ bụrụ na nchara gbasawanyere ma sie ike, ị kwesịrị ịrịọ ndị ọrụ nka ka ha rụzie ya.
Na nkenke, ọ bụrụhaala na ị maara ọgụgụ isi gbasara mmezi ma leba anya na ichebe ngere ngere na ndụ gị kwa ụbọchị, ị nwere ike ịgbatị ndụ ya ma mee ka ngwaahịa ígwè a rụchara nke ọma wee soro gị ogologo oge.
Oge ezipụ: Mar-20-2021
Nkume ịchọ mma, Akara stampụ, Akwụkwọ mpempe akwụkwọ, Ogige Ogige, Handrail tube, Ihe ịchọ mma nke Iron Gates,